मनोरञ्जन / सृजना Archives - Page3of 12 - JamarkoOnline
दिपक लिम्बुको फिल्मी शैलिको गीत मेरो मन चोरी लानेलाई सार्वजनिक । (भिडियो सहित )
इलामका विभिन्न मनोरम प्राकृतिक दृश्यमा छायांकन भएको दिपक लिम्बुको आधुनिक गीत " मेरो मन चोरी लानेलाई" सार्बजनिक भएको छ। एकताका फिल्मी शैलिका गीतहरुमा र फिल्महरुमा नै जमेका दिपक लिम्बुको यो गीत पनि रोमान्टिक अनि फिल्मी शैलिमै तयार भएको छ । गीतको भिडियो पनि अत्यन्तै धेरै मिहेनत गरेर फिल्मी शैलिमै
किन शान्ती श्री परियारले भनिन ”मर्न बेश लाग्यो ” हेर्नुहोस भिडियो ।
काठमान्डाँै । नेपाली मौलिक लोक गीत संगीतको क्षेत्रमा निकै रुचाइएकी गायिका शान्ति श्री परियार र गायक लाल बहादुर विसीको आवाजमा ”मर्न बेश लाग्यो ” गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । प्रेमीको धोकामा विरतिएकी प्रेमीको पिडालाई गीतमा समेटिएको छ । गीतमा चोट र व्याथालाई समेटेर चोटका शब्दहरुलाई समेटिएको छ । लाल
स्पेनिस फ्लेवरमा पदमले ल्याए ‘कहिँ कतै’ (भिडियो)
गायक पदम भट्टराईको स्वरमा रहेको ‘कहिँ कतै तिम्रो सम्झनामा’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । गणेश न्यौपानेको शब्द तथा संगीत रहेको गीतमा विक्रम कार्कीको एरेञ्ज छ । काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा खिचिएको गीतको भिडियोमा गायक भट्टराई स्वयं फिचर्ड छन् । उनीसँगै मोडल सोनिका केसी पनि देखिएकी छन् । गायक भट्टराई आफ्नै
माघ १५ र १६ मा राष्ट्रिय गजल महोत्सव
काठमाडौं, ८ पुस नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, काव्य विभाग प्रमुख प्रा. डा. हेमनाथ पौडेलको संयोजनमा नेपाली गजलका विज्ञ, अभियन्ता र सर्जकहरूसँगको विस्तारित बैठकले “राष्ट्रिय गजल महोत्सव २०७६“ आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ । हिजोको बैठकमा महोत्सव गर्नेबारेमा गजल अभियन्ता अगुवाहरुको सल्लाह र सुझावपछि प्रज्ञा भवनमा नेपालका सातै प्रदेशका गजलकारहरूको प्रतिनिधिमूलक सहभागिता
पथरीशनिश्चरेकी रिजु मिस पूर्वाञ्चल
पथरीशनिश्चरे, ७ पुस पहिलो मिस पथरीशनिश्चरे विजेता रिजु भट्टराईले मिस पूर्वाञ्चल २०२० को उपाधि प्राप्त गरेकी छिन् । मिस पथरी शनिश्चरे २०१९ की विजेता रिजुले धरानमा सम्पन्न प्रतियोगिताको फाइनल राउण्डमा २० जना प्रतिष्पर्धीलाई उछिन्दै उपाधि जितेकी हुन् । उनले उपाधिसँगै २ लाख रूपैयाँ पनि पाइन् । उनले उपाधिसँगै मिस पर्सनालिटीको
पथरीशनिश्चरे नगर गीत ‘यो हो हाम्रो पथरीशनिश्चरे……’ सार्बजनिक (भिडियो सहित्)
इश्वर दुलाल, पथरी पथरीशनिश्चरे नगर गीत 'यो हो हाम्रो पथरीशनिश्चरे ......' सार्बजनिक भएको छ । उक्त गीतमा नगरका बिभिन्न जातजाती, भाषा, सस्कृती, कला तथा विभिन्न संग संस्थालाई समेटेर तयार पारीए हो । गितलाई भुपेन्द्र तिम्सिनाले रचना गरेका हुन् भने उक्त रचनालाई देव गुरुङले संगीत भरेका छन् । उक्त नगर गितमा
भारतीय निर्देशकको निर्देशनमा नेपाली गीतको भिडियो निर्माण(Vedio)
नेपाली सांगीतिक आकाशमा नयाँ फरक फ्लेबरको लोक गीत " मर्छु कि क्या हो " सार्वजनिक भएको छ । हाल भारतको मुम्बईमा सांगितक र अभिनयको कक्षा लिई रहनु भएको गायिका आश्मी रिसाल र गायक सुरेस शाहीको गीतमा आवाज रहेको छ । गीतमा शब्द तथा संगीत पनि सुरेश शाहीको नै रहेको छ
रोमान्टिक म्युजिक भिडियो ‘सुखमा मात्र होइन’ सार्वजनिक
रोमान्टिक म्युजिक भिडियो 'सुखमा मात्र होइन' सार्वजनिक भएको छ । निराजन प्रधान र सृष्टि खड्का फिचर्ड गीतको म्युजिक भिडियोलाई मुस्तांगमा खिचिएको हो । भिडियोलाई निर्देशक निसान कास्यप घिमिरेले निर्देशन गरेका हुन् । अम्बिका गुरुङको शब्द ,सरोज पोखरेलको संगीत रहेको गीतमा स्वर भने प्रताप दास र शुस्मा बिस्वकर्माले भरेका छन । गीतमा एरेन्ज भने उदयराज पौडलले सुन्न सकिन्छ । बुद्द थापाको छायाँकनमा तयार
काठमाडौं,पुष २ । थाइल्याण्डमा हुने इन्टरनेशनल फेशन फेष्टिबलका लागि प्रतियोगिको छनोट सुरु गरिएको छ । बालबालिका र युवा युवतीहरुमा लुकेर रहेको प्रतिभालाई फेशन शो मार्फत उजागर गर्दै आइरहेको ड्रिम सर्च एजेन्सीले ‘टिन एस ए एण्ड एम फेशन रनवे’ थाइल्याण्ड इन्टरनेशनल फेशन फेष्टिबलका लागि प्रि किड्स, किड्स, प्रि टिन र